ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
Posted by ပြည့် စုံ on June 18, 2012 at 12:35pm
တချို့မိန်းကလေးတွေက ချစ်သူရှာရင် ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတတ်တယ်ကြင်နာရမယ်၊ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိရမယ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိရမယ်၊ ငွေကြေးရှိရမယ်.. တဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးက လူတွေလုလို့ ကုန်ကုန်ပြီ။ ဒီလောကမှာ အရာရာပြည့်စုံ ခြောက်ပစ်ကင်းတဲ့လူမျိုးသင...့်အရွေးကိုခံဖို့ စောင့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။
ယောက်ျားဆိုတာ ကောင်းကွက်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်ရှိတာနဲ့ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမယ်ကြင်နာတတ်တဲ့ ယောက်ျားကို တိုးတက်လိုစိတ်ရှိအောင် သင်လှုံ့ဆော်တတ်ရတယ်
တိုးတက်ကြိုးစားတဲ့ယောက်ျားကို အာရုံစူးစိုက်မှုရှိအောင် သင်ထိန်းသိမ်းတတ်ရတယ်
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ (၁) စောင့်ပြီးမှ ရလာတာ (၂) ထိန်းသိမ်းပြီးမှ ရလာတာ (၃) သည်းခံပြီးမှ ရလာတာဖြစ်တယ်။နှိုင်းနှိုင်းစနေ...
Tags: ရသ Like9members like this
Comment by Daw blossom thaung on September 8, 2012 at 3:46pm ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ (၁) စောင့်ပြီးမှ ရလာတာ (၂) ထိန်းသိမ်းပြီးမှ ရလာတာ (၃) သည်းခံပြီးမှ ရလာတာဖြစ်တယ်။
**** လုံးဝ မှား သည်
Comment by thida.833@gmail.com on September 8, 2012 at 3:40pm ဒါဆို မိန်းကလေးက ပဲ သူတို့ကို ဦးဆောင်လို့ လမ်းညွှန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ Comment by Aye Myat Thu on July 2, 2012 at 2:58pm အဲဒါ အမှန်ဆုံးပါပဲ Comment by Aye Myat Thu on June 30, 2012 at 2:22pm အင်း ထိန်းသိမ်းပေးရင်လူတော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထိန်းသိမ်းပေးရမှာပေါ့ Comment by myat thu on June 22, 2012 at 1:40am ယောကျာင်္ကောင်းကြောင်းလေးနဲနဲတင်ထားမိတာကိုများ..
အဲဒါပဲ. ဘာမှလဲတိပဲနဲ့..ဟာဟ Comment by aung myint tun on June 21, 2012 at 7:53pm အမှန်တွေပြောရရင်တော့ မိန်းမထိန်းရင် ယောကျာင်္းတွေက ပြုပြင်သလောက်ရတယ် မွေးကတည်းက မိန်းမလက်ပေါ်မှာကြီးလာတာလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်
Comment by လေပြေသွေး on June 21, 2012 at 3:22pm ဟုတ်မလားမသိဘူး Comment by Daw blossom thaung on June 21, 2012 at 2:31pm ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ
(၁) စောင့်ပြီးမှ ရလာတာ
(၂) ထိန်းသိမ်းပြီးမှ ရလာတာ
(၃) သည်းခံပြီးမှ ရလာတာဖြစ်တယ်/----မိတ်ဆွေမှားနေပြီ။ i wait him nearly about 40 years old. Comment by nerrium teller on June 21, 2012 at 9:11am ဟယ်ဒုက္ခယောင်္ကျား ရမမဟုတ်တော့ဖူး
တခါဖတ်ဖူးတာက လောကမှာ ကိုယ်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ယောင်္ကျားမရှိဆို Comment by aung ba min on June 20, 2012 at 8:54pm ယောက်ျားလေး လို့ဘ၀ကို၇လာတာနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူဆိုတာ ၇ှိချင်လာတယ် စိတ်ကူးထဲမှာ ဆန္ဒ၇ှိသလောက်စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်၊
့ယောက်ျားတာဝန်က wind breaker ကိုယ်ချစ်သူအတွက်ဆို အန္တ၇ယ်ဟူသမျှကိုကာကွယ်၇မယ် carrier ချစ်သူနဲ့နေလာတဲ့အခါ ၀၀လင်လင်ကြွေးမွေဖို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ တခုခု တတ်မြောက်ပြီးသားရှိနေ၇မယ် luxury ချစ်သူနဲ့နေတဲ့အခါ ချစ်သူကို မငြိုးမငယ်စေ၇ အိစက်ညက်ညောတဲ့ ဖဲမွေယာပေါ်မှာ အပြည့်အ၀ ပျော်နှိုင်စေ၇တဲ့ အစွမ်း လည်းရှိဖို့ လိုပါတယ် ၊ ဒီအခြေခံ အချက်လေး ကိုမှ မစွမ်းနှိုင်၇င် တာဝန်ဆိုတာကို မသိ နှိုင်တော့ပါ သူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးနဲ့ ဒုက္ခလည်းမယူပါနဲ့ ဇွတ်လုပ်ချလိုက်၇င်တော့ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ ဖြစ်နေတဲ့ cd ဓါတ်ပြားနားထောင်၇သလို ဘယ်တော့အဆင်မပြေနှိုင်ဒေါသ ၇သ မျိုးစုံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ် စဉ်းစားကြပါဆိုတာအဲတာဘဲ ‹ နောက်သို့
7. Chit Snow
9. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)